Wasiiradda Warfaafinta iyo Waxbarashada oo khilaaf Cusub soo kala dhex galay - Awdinle Online
Wasiiradda Warfaafinta iyo Waxbarashada oo khilaaf Cusub soo kala dhex galay
December 8, 2019 (AO) – Wasaaradaha kala ah Waxbarashada iyo Warfaafinta dowlada federalka Soomaaliya ayaa isku haysta magacaabida guddi dhaqan oo uu dhowaan magacawday Wasaarada Waxbarashada.
Warqadan ka soo baxay Wasaarada Warfaafinta ayaa lagu sheegay in dhismaha guddiga aysan wax shaqo ah ku lahayn Wasaarada Waxbarashada maadaama uu yahay guddi dhaqan.
War kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay in Wasaaradda waxbarashadda wax shaqo ah aysan ku laheyn dhismaha Guddiga dhaqanka,islamarkaana ay ka mid tahay shaqadda loo idmaday Wasaradda Warfaafinta.
Qoraalka ka soo baxay Wasaarada Warfaafinta ayaa lagu cadeeyay in gudigaas ay wasaaradda waxbarashadu maanta ku dhawaaqday yahay guddi baalmarsan nidaamka loo dhiso gudigan oo kale oo aanu sharci ahayn, isla markaana meteli karin bahda dhaqanka iyo warfaafinta ee Soomaaliya.
Waxaana ugu dambeyntii qoraalka lagu sheegay in Wasaaradda Waxbarashada bilaabi doonto dhismaha guddi qaran oo si hufan loo dhisay ayna ku mideysan yihiin dhammaan hay’adaha dawladda iyo kuwa bulshada ee doorka ku leh.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay Wasaarada Waxbarashada ee la xiriirta qoraalka ay soo saartay Wasaarada Warfaafinta.
Halkan hoose ka aqriso Qoraalka ka soo baxay Wasaarada Warfaafinta.
Previous articleSomaliland oo la dagaalameysa Ayax ku Habsaday Gobalka Sool
Next articleDaawo:-Su’aalo la weydiiyeen Wasiir Islow Ducaale oo ka jawaabay